MAXAA CUSUB | GURIGA HAWEENKA | Page 30
Home » MAXAA CUSUB (page 30)
Waxbadan ka ogaaw xanuunada laga dhaxlo hurda yarida.
Admin 17 days ago	Heath, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Digirta oo marka la kariyo Soomaalida qaarkood u taqaano “Canbuulo”, waxaa lagu sheegay faa’iidoyin cajiib badan oo caafimaadka iyo horumarka jirka bini aadimka qeyb weyn ka qaadata.
Waloow ay Soomaali badan caado u tahay cunista digirta isla markaana ay dalaga ay beertaan ugu horeyso, halka qaar kalena ayba dhankooda caay ka tahay, hadana waxaa lama huraan ah in bulshadu ogaato loona iftiimiyo faa’iidooyinka qarsoon ee digirtu leedahay, hadii uu qofku ogaan lahaana wuu joogtayn lahaa ugu yaraan todobaadkii 3 jeer.
Hadaba warbixintaan oo aynu kasoo xiganay wargeyska livestrong ayaan isku dayi doonaa in aan soo koobno wax yaabaha ugu muhiimsan uguna faa’iidada badan ee digirtu u leedahay dadka daneeya caafimaadkooda iyo horumarka noloshooda.
1- Digirta waxaa ku jira Vitamins iyo Minerals kuwaasoo ah laba shey oo ka mid ah rukniyada jirku ku shaqeeyo, waxaa gaar ahaan digirtu qani ku tahay Vitamine B, kaasoo dhiiga cas iyo hagaajintiisa qeyb weyn ku leh.
2-Digirtu waxey qani ku tahay Fiber, kaasoo howlihiisa ay ka mid yihiin isku socodka iyo u qeybinta jirka cuntada uu qofku cuno. Digirta waxay ka hortagtaa calool fadhiga.
3-Digirtu waxay qani ku tahay iron sidaas darteed waxay ka hortagtaa dhiig yarida, tani waa sababta lagula taliyo hooyooyinka urka leh iyo caruurta oo u baahan iron badan in ku dadaalaan cunista digirta.
4- Digirtu waxey qani ku tahay Protein baruur la’aan ah, taasoo la macno ah in aad heleyso Protein kugu filan adigoo jirkaaga wax baruur ah aysan kusoo kordhin.
5- Digirtu waxay sidoo kale buuxin kartaa booska khudaarta iyo Fruits-ka.
6- Waxay la dagaalantaa xanuuno ay ka mid yihiin kansarka, dhiig karka iyo wadne xanuunka: Qiimaynta tijaabooyin la sameeyey ayaa lagu ogaaday inay digirtu kala tacaasho unugyada jirka in cudurka kansarku ku samaysmo iyada oo unugyadan loo diidayo inay tarmaan, waxa kale oo ay hoos u dhigtaa koritaanka baraha iyo finanka waaweyn ee maqaarka dibadda uga soo baxa.
Cilmi-baarayaal ka tirsan Harvard School of Public Health ayaa baaritaan ay sameeyeen ka dib ku sheegay in dumarka ugu yaraan todobaadkii laba jeer isticmaala digirta ay 24% uga badbaadi karaan inay jeeshaan kansarka naasaha ku dhaca. Darsin daraasado ah oo hore loo sameeyey ayaa digirta ku xiriiriyey inay hoos u dhigto halista cudurka wadnaha, macaanka nooca 2aad, dhiig-karka iyo cudurka kanskarka ee ku dhaca naasaha iyo malawadka.
7- Waxay wanaajisaa xusuusta: Digirtu waxay kobcisaa xusuusta sababtoo ah waxaa ku jira Vitamin B1 oo muhiim u ah unugyada maskaxda gaar ahaan kuwa garashada qaabilsan
8- Digirtu waxay yaraysaa cayilka: hadii aad hilib leedahay oo aad digirta ka dhigato qeyb muhiim ah oo raashinkaaga ka mid ah waxaad dareemeysaa hoos u dhac, hadii aadan marka horeba buurneyna waxaad ahaaneysa qof jirkiisu Protein ku filan helo isagoo aysan jirkiisa ku saa’idin duhunta iyo cadiinta (baruurta)
DAAWO: Wax ka ogow Maxay Wadaagaan Somaliya & Suudaan?
Admin 17 days ago	MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Waxaa Jira waxyaabo badan oo ay wadaagaan Somaliya iyo Sudan,waxaa xaqiiq markii ad daawatit Warbixintaan in aad wax badan oo adan hada ogan ogaan dooniti.
DAAWO: NASTEEXO INDHO OO SAARTAY HEESTA AY KAGA FADHIISAN LAHAYD FANKA.
Fanaanada caanka ah ee Nasteexo Indho ayaa soo saartay hees cajiib ah oo wadata Muuqaal soo jiidasho leh.
HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA HEESKA
Annabelle Jefferson oo ah gabadh 44jir ah oo u dhalatay dalka Mareykanka gaar ahaan California ayaa labadeeda waalid dacwad kusoo dalacday maxkamadeed iyadoo kaga cabatay inay sabab u yihiin waalidkeed foolxumadeeda maadama oo muuqaalkeedu yahay mid ay labadooda ka dhaxashay midaasna ay sabab u noqotay in la furo sedex jeer bulshaduna ku caayan muuqaalkeeda.
Robert Jefferson, 82jir, and xaaskiisa Ruby Jefferson, 76jir
Annabelle ayaa tidhi “Labadooduba ilaa xad way foolxunyihiin arxan daro iyo qalad ayay ahayd inay caruur dhalaan oo muuqaalkoda foosha xun soo laba celiyaan”.
Waxay intaas ku dartay in ninkeedii u horeeyey markuu furayay maxkamada ka sheegey in subaxdii markuu wejigeeda arko lalabo qaban jirtey suuligana ku ordi jirey si uu u matago foolxumadeeda darteed waxayna tidhi “Hadalkiisa maan ilaawin wuuna i damqaa mar walba oon xasuusto”.
Waxaana xusid mudan in ninkeedi u dambeeyey uu ahaa nin aan aragiisu fiicneen oo 40% wax arki kara markii uu qalniin sameeyey ee aragiisu usoo noqday uu furey usbuuc ka dib muuqaalkeda awgeed.
Annabelle ayaa sheegtay inay sameyn doonto urur difaaca xuquuqda dadka ay isku xaalada yihiin ee muuqaalkooda lagu takooro ee raba inay waalidkood ka aargoostaan.
Fanaanka Sacad Jumayka oo ah fanaaninta raga ah ee dhawaan kasoo caan baxay magaaladas ayaa muuqal asxaabtiisa kula wadaagay facebook, isagoo ku cabiray jaceylka uu uhayo fanaanada Xaliimo Gobaad.
HLAKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA
DAAWO: Nancy Ajram Fanaanada ugu Iibka Badan Uguna Saamaynta Badan Bariga Dhexe 2017
Xidigada caanka ah ee reer Lubnaan Nancy Ajram ayaa magazineka caalamiga ah ee Forbes u doortay inay tahay xidigada dhanka dumarka ugu Taageeraha badan uguna iibka badan dhanka Albumyada. Forbes ayaa xog uruurin ay sameeyen kuso ogaaday inay fanaanadan ku haysato barta internetka taageerayal 48Million.
HALKAAN KA DAAWO MUUQALKA OO AANA CAADI AHAYN
Daawo Nuxurka Waraysigii U Dambeeyey ee Yurub Geenyo ku kalifay in ay ka takto Muqdisho.
Fanaanada caanka ah ee Yurub Maxamed Cabdi (Yurub Geenyo) ayaa Astaan Tv lagu casuumay iyadoo siisay waraysi aad u xiiso badan oo lagu waydiiyey su’aalo fara badan oo dad waynaha ka dhex guuxayay.
HALAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA
Qiso Cajiib ah Welibana Jaceyl Ah Dareen Culusna Xambaarsan “Qisada Maanta”.
Admin 17 days ago	Lamaanaha, MAXAA CUSUB, QOYSKA IYO NOLOSHA
Qiso jaceyl oo saameyneysa qof waliba oo aqriya ,qisadaan ayaa noqotay mid aad usoo jiidatay laabteyda igaarsiisayna heer xaadeyda ay istaagto intaan dunida Qiso Cajiib ah Welibana Jaceyl Ah Dareen Culusna Xambaarsan “Qisada Maanta”.
Qiso jaceyl oo saameyneysa qof waliba oo aqriya ,qisadaan ayaa noqotay mid aad usoo jiidatay laabteyda igaarsiisayna heer xaadeyda ay istaagto intaan dunida ku noolaa aqbaarada adduunka aqrinaayey Aallad kasto wax lagu qoro qisadan oo kale wali dhaayaheygu meyqaban
Waa qiso qof waliba uu qudhiisa la dhacaayo haddii qadarta ALLE iyo nasiibka uusiin lahaa ma uusan ka beyreen dariiqeeda
Qisadan oo aheyd mid u dhaxeysa wiil iyo gabar muslimiin ah kuwaa oo is jeclaa muddo dhan lix sano (Ø³Ø¨Ø­Ø§Ù† Ø§Ù„Ù„Ù‡) ayaa waxaa dhacday in mid waliba niyadiisa ay ku beeranto wal wal iskuna yiraah ALLE subxaanahu watacaalaa kama raalli ahan xiriirkaan aan ku dhisneyn shareecada islaamka asagoo mid waliba qudhiisa (nafsan ahaantiisa) go’aan ku qaatay in uu isaga tanaazulo arinka. midna kan kale lama uusan tashan labadoodiiba mid walibana waxa uu raacay wadadiisa isaga oo inankii isaga safray magaladii ay ku nooleed gacalisadiisa.
MUUQAAL: Gabadh Soomaali ah oo filimo dukumentari ah sameyso iyo waxa ku dhaliyey
Markanna waa warbixin ka mid ah taxanaha BBC-da ee100 dumar ah, taxanahan ayaannu diiradda ku saarnaa dhibaatooyinka haweenka caalamka haysta iyo sida xal loogu heli karo.
Maantana waxaan idiin haynaa wareysi aannu la yeenay gabadh Soomaaliyeed oo filimo dukumentari ah ku soo saarta afafka Soomaaliga iyo Ingiriisiga.
Fatxiya Maxamed Cabsiye, oo horay ugu soo shaqeysay xirfadda saxaafadda ayaa Mareykanka ku sameysa sheekooyin xiiso badan oo muuqaal ah oo uu ka mid yahay Dikumentari ay ugu magac dartay Riyadii burburtay, kaas oo ay ka sameysay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhalatay Mareykanka misana Soomaali u aaday inay ku biiraan ururka Al-Shabaab.
Fatxiya waxaa wareystay weriyaha BBC-da ee Mareykanka Maxamed Xaaji Xuseen Shiine oo marka hore waydiiyay waxa ku dhaliyay inay filimaanta sameyso.